Letter to Citizen Buba: Ukusabela Dousing nogesi Amanani
Posted By: May Anokuru Mashi 29, 2014
Njengoba izincwadi in the domain yomphakathi usanda kuthathwe isici olumangalisayo Nigeria, kungase kufaneleke ukuba Spice up lo mkhuba ngokungeza mine - For the ukusetshenziswa of the eNigeria ejwayelekile. The Nigerian kagesi abathengi ezifumana ezibekelwe of incwadi yami evulekile, njengoba ubonakala Citizen Buba, ngubani okwamanje osolisayo (kanye nezigidi uhlobo yakhe) zamanani okungekuhle kwamandla kagesi in Nigeria sika post-azimele era.
Le piece kuhloswe dousing ukusabela okungekuhle cishe azungeze, futhi asuse isikali elikhulu emehlweni Citizen Buba sika.
Ngizizwa ngishukumiseleka ukuba sisebenzise isiqu achazayo, "Citizen", to your name due to the realisation that your expectations of what happens to pricing or rates of electricity supply is a pure reflection of those being harboured by millions of other electricity consumers in Nigeria. Ngamanye amazwi, wena zifanekisela isakhamuzi Nigerian ejwayelekile, kanye amashiya esibonisa ukulangazela ocacile ngalokho okuzokwenzeka mayelana rates okumele ikhokhelwe ugesi, Manje lokho ezenziwa ukugijima ngasese sebelithathile phezu kwempahla for isizukulwane nokusabalalisa kwamandla kagesi, ngenxa azimele muva nje liphethe ngokuthi lomkhakha amandla.
Akuyona out of indawo ukulindela ayithola umphakathi kunoma ukwanda esemthethweni rates ugesi abathengi. Yingakho le ncwadi sibhekiswe kuwe, njengoba ukwaziswa okwengeziwe mayelana nalokho okwenzeka ngempela kuyosenza ukuqonda komphakathi, futhi kamuva douse yimuphi ukusabela okungekuhle umphakathi. Ukuba umthengi Nigerian ngokwami, I am impela ukhumbula imibuzo okungenzeka kolweni engqondweni yakho njengoba udlula kulesi singesihambelanayo.
Omunye akudingeki kube clairvoyant ukwenza ukuthi unayo le mibuzo engqondweni: (a) Ingabe azimele yi muva nje liphethe ngokuthi in rate ukwanda? (b) Uma yebo, yini inkolelo for ezifana? (c) Yini engenziwa ukunciphisa umthelela emahlombe abakhokhintela, uma zenzeka rate uyanda? Ngaphambi kokuphendula le mibuzo, Ngithanda ukuba aveze lokho ikhasimende Nigerian manje ngamaphepha (yingakho yimuphi okubonisa kwamanani abangela zenkolo), ngokusebenzisa uphonsa eziningi ukukhanya kulokho uthola njengamanje maqondana nalokho le oda entsha lisiphatheleni, abathengi.
Beetle, Ngithemba uyaqaphela ukuthi kunzima kancane ecela abantu ukukhokhela umkhiqizo ngaphansi-ihlinzekwa, njengoba amandla kagesi njengamanje? Kuyinto izindaba eside ukuthi amakhaya Nigerian kakhulu futhi izikhungo ebhizinisini yindlala kagesi. The ejwayelekile ikhasimende eNigeria in the power emakethe kagesi, like labo kwezinye climes, has zimbili eziyisisekelo zithandwa ayisisekelo, futhi ezinikezwayo ukuze of kuqala – Ukuvikeleka supply, futhi intengo. Thina sibhekene yokugcina lapha, njengoba isihloko ekuqaleni kulolu chungechunge nodaba of supply ngesikhathi expatiating on sokusakaza amandla quality.
Ngaphambi kokukhuluma egcina njengamanje njengengxenye oda entsha, sicela musa uyibambe ngokumelene nami uma mina sikhuthazo wena ukukhumbula ukuthi, "Umbuzo ngamunye, kukhona impendulo surface futhi umuntu ezijulile ". Impendulo yombuzo wakho ezijulile on zamanani yilokho ngempela lwakha labo amazinga noma amashaji okubonisa in ugesi billing sakho senyanga. Beetle, musa ukukhohlwa lokhu – Bill sakho senyanga (okuyinto umthetho for the ukusetshenziswa of energy kagesi noma ugesi) sakhiwe izingxenye ezimbili:
(a) Amacala (ngokuvamile umake energy icala) ngokusekelwe emandleni kagesi (e-hour kilowatt noma kWh) sokudliwa imisebenzi yasendlini noma izindaba ngenyanga. Kuhlanganisa icala elihlobene ukukhiqizwa kagesi (odala ugesi); icala for zokusebenzisa kanye nokugcina kagesi yokudlulisela uhlelo (kudluliswe kugridi); ukushaja for ezihambayo ugesi kolayini ukusatshalaliswa ekhaya lakho noma ibhizinisi (wokuyidlulisela endaweni yakho); futhi yokuthengisa inqubo (izindleko ekuphathweni bethengisa khona kuwe).
(b) A ugesi levy encane (okuvame ukubizwa ngokuthi fixed charge nyangazonke, service icala noma Imali service). Lokhu ingxenye sisiza lokukhokhisa, imitha ukufundwa, service call Ukusabela, line service nokugcinwa kanye ukufakwa new imishini.
Citizen Buba, uqaphele ukuthi esimweni lapho unquma hhayi ngisho kudle omunye kWh ngo ekhaya noma ibhizinisi lakho emagcekeni ngenyanga, (a) ifundeka ngenhla zero, ngenkathi (b), icala service kuleyo nyanga, ukuchazwa isigaba yakho amakhasimende, ihlezi akhokhiswa-akhawunti yakho. BaseNigeria kumele njalo nikhumbule ukuthi umqondo Service Charge in the inqubo lokukhokhisa akusebenzi lapha kuphela (hhayi 'into Nigerian'), kodwa uthola kwezinye izingxenye zomhlaba. Sicela ukukhulula ukuqinisekisa lokhu. Ukuya by parlance lakithi, service icala kuyinto "umnikazi isiqiniseko".
On ukuthi azimele komkhakha amandla eyadala ukwanda rate noma ngenye, impendulo 'Yebo'. It wenza, kodwa lake. The azimele wabiza ukwethulwa umbuso zamanani umake Multi Year intela Order (INDAWO YOKUKHOKHA), wafaka endaweni by the Nigerian Electricity Regulatory Commission noma NERC. Kuhloswe ukuba likwenze ukuzimisela izindleko zikagesi ithengwa ukusatshalaliswa (futhi tekutsengisa) Izinkampani ezivela June 1, 2012 to May 31, 2017. Kafushane, ngaphandle MYTO bezimali ngabe anikezwe ebhentshini ebanzi kokutshalwa kule mboni, futhi umsebenzi azimele kwakuyoba a flop, njengoba zamanani aphansi kwakungeke isuke izindleko alulame zimali. Ukuze more, Beetle, Ngiyaninxusa ukuba uvakashele web NERC site. (Kuzoqhutshwa)
1 Amazwana on "Letter to Citizen Buba: Ukusabela Dousing nogesi Amanani"
jovie | June 9, 2014 at 2:18 pm | Phendula